Lima 4.3 `The range() function´ — TIIDE
Lima 4.3 `The range() function´
Ma Khin Mar Yu
June 2018 edited June 2018 in Machine Learning
(4.3) Range function:
Range function ဆိုတာ sequence of number​တွေဖြစ်​တယ်​။number ​တွေကိုအစဉ်​လိုက်​တိုင်​း`0´ က​နေကိုယ်​လိုချင်​တဲ့ range ထိထုတ်​​ပေးချင်​တဲ့အခါ range function ကိုသုံးရတယ်​။
Eg. range( 10 )
range(10) မှာ10ဆိုတာကိုယ်​လိုချင်​တဲ့ sequence ရဲ့length ကို​ပြောတာပါ။အမြဲတမ်​း`0´ က​နေစထုတ်​​ပေးမှာဖြစ်​တဲ့အတွက်​ `0´ to `9´ ပဲထွက်​မှာပါ။တစ်​နည်​းအားဖြင်​့ `10´ ဆိုတဲ့ variable က end point ကိုဆိုလိုတာပါ။ဒါ​ပေမဲ့ end point က​တော့သူ့ရဲ့sequence ထဲမှာဘယ်တော့မှပါ​နေမှာမဟုတ်​ပါဘူး range(5)ဆိုတာနဲ့ range(0,5)
နဲ့ဟာအတူတူပဲဆိုတာသိထားရပါမည်​။`0´ ဆိုတာ start point က်​ို​ခေါ်တာပါ။5က​တော့ end point ဖြစ်​ပါသည်​။end point ကဘယ်​​တော့မှမပါတာဖြစ်​သည်​့အတွက်​0to4ထိပဲဖြစ်​မှာပါ။0to4ကို sequence လိုက်​ output ထုတ်​ချင်​ရင်​ for loop နဲ့ထုတ်​​ပေးရပါမည်​။
Eg. for i in range(5):
​နောက်​တစ်​မျိုးက​တော့ကိုယ်​လိုချင်​တဲ့ start point နဲ့ end point ကိုလိုချင်​သလိုသတ်​မှတ်​​ပေးလို့ရပါတယ်​
Eg. range(5, 10 )
5 က start point ဖြစ်​ပြီး 10 က end point ဖြစ်​ပြီး
5ကစပြီး 10 မတိုင်​ခင်အထိ output ထုတ်​​ပေးမှာဖြစ်​ပါတယ်​။အ​ပေါ်က ဥပမာအတိုင်​းစမ်​းကြည်​့လို့ရပါတယ်​။
တတိယတစ်​မျိုးက​တော့ start point, end point ​တွေအပြင်​ increment (ဒါမှမဟုတ်​ရင်​ distant လို့လည်​း​ပြောလို့ရပါတယ်​) သုံးလို့ရပါတယ်​။
Eg. range (0, 10 ,3)
start point end distance
ဒီEg မှာဆိုရင်​ start point နဲ့ end point က​တော့အ​ပေါ်ကတိုင်​းပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ distanceဆိုတာ start point က​နေစပြီး​တော့3ခုခြားစီကွာခြားချင်​တာကို​ပြောချင်​တာပါ(တစ်​နည်​းအားဖြင်​့3ခုစီ increment) ဖြစ်​လာတယ်​လို့လည်​း​ပြောလို့ရပါတယ်​။
Eg. for i in range (0,10 ,3)
range( ) နဲ့ len( ) ကို​ပေါင်​းပြီးလည်​းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်​။
a=[ `mary´ , `had´ ,`a´ , `little´ ,`lamb´ ]
for i in range ( len (a) ) :
print ( i ,a[ i ] ) , len (a[ i ] ) )
if len(a[ i ] )%2 ==0:
print ( ` even length ´ )
print ( ` odd length ´ )
Output:0mary 4
3 little 6
4 lamb 4
range ကို print နဲ့သုံးပြိီး output ထုတ်​ရင်​​တော့sequence ထွက်​လာမှာမဟုတ်​ပါဘူး။
Eg. print ( range ( 10 ) )
Output: range ( 0, 10 )
list အ​နေနဲ့ ထုတ်​ချင်​ရင်​​တော့ list ဆိုတဲ့ function နဲ့တွဲသုံး​ပေးရပါတယ်​။
Eg. list ( range (5) )
[0,1 ,2,3,4]